11 Ka oge na-aga, ndị Izrel niile+ zukọtara wee bịakwute Devid n’ime Hibrọn,+ sị: “Lee! Anyị na gị bụ otu ọkpụkpụ na otu anụ ahụ́.+ 2 Ma ụnyaahụ ma n’oge gara aga, ọbụna mgbe Sọl bụ eze, ọ bụ gị na-edu Izrel apụ ma na-akpọlata ha;+ Jehova bụ́ Chineke gị wee sị gị, ‘Ọ bụ gị ga-azụ ndị m Izrel dị ka atụrụ,+ ọ bụkwa gị ga-abụ onye ndú+ ndị m Izrel.’” 3 Ndị okenye niile nke Izrel wee bịakwute eze na Hibrọn. Ha na Devid wee gbaa ndụ na Hibrọn n’ihu Jehova; e mesịa, ha tere Devid mmanụ+ ịbụ eze Izrel, dị ka okwu Jehova kwuru+ site n’ọnụ Samuel si dị.+ 4 E mesịa, Devid na Izrel dum gara Jeruselem,+ ya bụ, Jibọs,+ bụ́ ebe ndị Jibọs+ bi. 5 Ndị bi na Jibọs wee malite ịsị Devid: “Ị gaghị abata ebe a.”+ N’agbanyeghị nke ahụ, Devid weghaara ebe e wusiri ike bụ́ Zayọn,+ ya bụ, Obodo Devid.+ 6 Devid wee sị: “Onye ọ bụla nke ga-ebu ụzọ buso ndị Jibọs agha+ ga-abụ onye ndú na onyeisi.” Joab+ nwa Zeruya wee buru ụzọ gbagoo, o wee ghọọ onyeisi. 7 Devid wee biri n’ebe siri ike mbanye.+ Ọ bụ ya mere ha ji kpọọ ya Obodo Devid.+ 8 O wee malite iwu obodo ahụ gbaa gburugburu, malite na Milo* ruo n’akụkụ ya niile, ma Joab rụziri+ ebe fọdụrụ n’obodo ahụ. 9 Devid wee na-adịwanye ukwuu,+ n’ihi na Jehova nke ụsụụ ndị agha nọnyeere ya.+ 10 Ndị a bụ ndị isi nke ndị dike+ Devid, bụ́ ndị na-akwadosi ya ike n’ọbụbụeze ya, ha na Izrel dum, iji mee ka ọ bụrụ eze dị ka ihe Jehova kwuru+ banyere Izrel si dị. 11 Nke a bụ aha ndị dike Devid: Jashobiam+ nwa onye si n’agbụrụ Hakmọnaị, bụ́ onyeisi mmadụ atọ. O ji ube ya gbuo narị mmadụ atọ otu mgbe.+ 12 Onye na-esote ya bụ Elieza+ nwa Dodo onye si n’agbụrụ Ahohaị.+ Ọ bụ otu n’ime ndị dike atọ ahụ.+ 13 Ọ bụ ya na Devid nọ na Pas-damim,+ bụ́ ebe ndị Filistia zukọtara maka ibu agha. E nwekwara ibé ala nke jupụtara n’ọka bali, ndị Izrel agbawokwa ọsọ n’ihi ndị Filistia.+ 14 Ma o guzoro n’etiti ibé ala ahụ napụta ya, na-egbukwa ndị Filistia, Jehova wee zọpụta+ ha n’ụzọ dị ukwuu.+ 15 Mmadụ atọ n’ime mmadụ iri atọ+ bụ́ ndị isi wee gbadaa n’oké nkume wee gakwuru Devid n’ọgba Adọlam,+ ka ndị agha Filistia mara ụlọikwuu na ndagwurugwu Refeyim.+ 16 N’oge ahụ, Devid nọ n’ebe siri ike mbanye;+ ebe ndị agha ndị Filistia+ na-anọ eche nche dịkwa na Betlehem n’oge ahụ. 17 Mgbe nwa oge gasịrị, Devid kwupụtara ihe na-agụ ya agụụ wee sị: “A sị nnọọ na m ga-aṅụ+ mmiri si n’olulu mmiri Betlehem,+ bụ́ nke dị n’ọnụ ụzọ ámá!” 18 Mmadụ atọ ahụ wee waba n’ebe ndị Filistia mara ụlọikwuu, sere mmiri n’olulu mmiri Betlehem, bụ́ nke dị n’ọnụ ụzọ ámá ma buru ya butere Devid.+ Ma Devid ekweghị ịṅụ ya, kama ọ wụpụụrụ ya Jehova.+ 19 O wee sị: “Tụfịakwa! Dị ka Chineke m si ele ihe anya, agaghị m eme ihe a. Ọ̀ bụ ọbara+ ndị ikom a, bụ́ ndị tinyere mkpụrụ obi ha n’ihe ize ndụ, ka m ga-aṅụ? N’ihi na ha tinyere mkpụrụ obi ha n’ihe ize ndụ wee bute ya.” O kweghị ịṅụ ya.+ Ihe ndị a ka ndị dike atọ ahụ mere. 20 Ma Abishaị+ nwanne Joab+ ghọrọ onyeisi mmadụ atọ ahụ; o ji ube ya gbuo narị mmadụ atọ, aha ya na-edekwa ude dị ka nke mmadụ atọ ahụ. 21 N’ime mmadụ atọ ahụ, a na-akwanyere ya ùgwù karịa mmadụ abụọ nke ọzọ, o wee bụrụ onyeisi ha; ma ọ harughị+ ka mmadụ atọ ndị mbụ ahụ. 22 Ma, ọ bụ Benaya,+ nwa Jehoyada,+ nwa otu nwoke bụ́ dike, onye mere ọtụtụ ihe na Kabzil,+ gburu ụmụ ndị ikom abụọ nke Ariel onye Moab; ọ bụkwa ya gbadara wee gbuo ọdụm+ n’ime olulu mmiri n’ụbọchị snoo na-ada. 23 Ọ bụkwa ya gburu onye Ijipt, bụ́ nwoke gbara ajọ dimkpa, nke dị kubit ise.+ Nwoke Ijipt ahụ ji ube+ nke yiri okporo osisi ndị na-ekwe ákwà; n’agbanyeghị nke ahụ, o ji mkpara gbadakwuru ya wee napụta onye Ijipt ahụ ube ahụ o ji ma were ya gbuo ya.+ 24 Ihe ndị a ka Benaya nwa Jehoyada mere, aha ya na-edekwa ude dị ka nke ndị dike atọ ahụ. 25 Ọ bụ ezie na a na-akwanyere ya ùgwù karịa mmadụ iri atọ ahụ, ma ọkwá ya erughị ka nke mmadụ atọ ahụ.+ Otú o sina dị, Devid mere ya onyeisi ndị na-eche ya nche.+ 26 N’ime ndị dike bụ́ ndị agha, e nwere Asahel+ nwanne Joab, Elhenan+ nwa Dodo onye Betlehem, 27 Shamọt+ onye Herọraịt, Hilez onye Pelọnaịt,+ 28 Aịra+ nwa Ikesh onye Tekoa, Abi-iza onye Anatọt,+ 29 Sibekaị+ onye si n’agbụrụ Husha, Aịlaị onye si n’agbụrụ Ahohaị,+ 30 Meharaị+ onye Netofa,+ Hiled+ nwa Beana onye Netofa, 31 Aịtaị nwa Raịbaị+ onye Gibia+ nke ụmụ Benjamin,+ Benaya onye Piratọn,+ 32 Huraị onye si na ndagwurugwu Geash,+ Abayel onye Bet-araba, 33 Azmavet onye Bahurim,+ Elayaba onye Shealbim, 34 ụmụ Heshem onye Gimzo, Jọnatan+ nwa Shegi onye Hararaịt, 35 Ahayam nwa Seka+ onye Hararaịt, Elaịfal+ nwa Ọọ, 36 Hifa onye Mekira, Ahaịja onye Pelọnaịt, 37 Hezro onye Kamel,+ Nearaị nwa Ezbaị, 38 Joel nwanne Netan,+ Mibha nwa Hagraị, 39 Zilek onye Amọn, Neharaị onye Bierọt, bụ́ onye na-eburu Joab nwa Zeruya ihe agha, 40 Aịra onye Itraịt, Gereb+ onye Itraịt, 41 Yuraya+ onye Het,+ Zebad nwa Alaị, 42 Adina nwa Shaịza onye si n’ebo Ruben, onyeisi ụmụ Ruben, onye mmadụ iri atọ nọ n’okpuru ya; 43 Henan nwa Meaka, Jọshafat onye Mitnaịt, 44 Ọzaya onye Ashtarọt, Shema na Jeayel, ụmụ Hotam onye Aroa, 45 Jedayel nwa Shimraị, nakwa Joha nwanne ya bụ́ onye Taịzaịt, 46 Iliel onye Mehavaịt, nakwa Jeribaị na Jọshavaya bụ́ ụmụ Elneam, Itma onye Moab. 47 Iliel na Obed nakwa Jaasayel onye Zoba.